Hazard iyo Marcelo oo hoggaaminaya lix xiddig oo ay Real Madrid iska iibineyso suuqa January – Gool FM
Hazard iyo Marcelo oo hoggaaminaya lix xiddig oo ay Real Madrid iska iibineyso suuqa January
Ahmed Nur December 27, 2021
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 16: Marcelo (R) of Real Madrid speaks with Eden Hazard prior to the Liga match between Real Madrid CF and RC Celta de Vigo at Estadio Santiago Bernabeu on February 16, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
(Madrid) 27 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay iska iibiso lix ciyaaryahan oo kooxdeeda koowaad ka tirsan suuqa kala iibsiga bisha Janaury kaasoo toddobaadka dambe si rasmi ah u furmi doona.
Gareth Bale iyo Isco ayaa ah magacyada ugu horreeya ee diiwaanka ka kooban lixda ciyaaryahan kuwaasoo laga iibinayo garoonka Santiago Bernabeu bisha January sida laga soo xigtay wargeyska MARCA, waxaana uu intaas ku daray in Macallin Carlo Ancelotti uusan qorshaha ku darsan inuu adeegsado labadan xiddig xilli ciyaareedkan.
Wargeyska ayaa intaas ku daray inay Los Blancos dhageysaneyso dalabaadka u imaanaya Marcelo, Eden Hazard, Mariano Diaz iyo Luka Jovic inkastoo qaar ka mid ah xiddigahan uu marmar adeegsado macallinka Taliyaaniga ah.
Si kastaba ha ahaatee, dhinaca kale, qandaraaska Luka Modric ee Real Madrid ayaa dhici doona xagaaga dambe ee 2022, waxaase lasoo warinayaa in kabtanka xulka qaranka Croatia uu saxiixi doono heshiis kordhin muddo gaaban ah.
Halyey John Terry oo qarka u saaran inuu Chelsea kusoo laabto shan sano kaddib... (Muxuu yahay doorka uu haatan qaban doono?)
Xilliga ay Barca ku dhawaaqeyso saxiixa Torres, saddex xiddig oo hor leh oo ay ka dooneyso Man City & Guardiola oo weerar caski ah ku raadinaya xiddig laf-dhabar u ah shaxda Xavi